Family Business Management - PAÑÑĀ Online School
မျိုးရိုးအစဉ်အဆက်မှ ထိန်းသိမ်းလာသော ကိုယ်ပိုင်မိသားစု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေကြသူများ၊ မိသားစုစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု စတင်တည်ထောင်မည့်သူများ နှင့် မိသားစုလုပ်ငန်း၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များနှင့် အခက်အခဲများကို လေ့လာလိုသူများ တက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Daw Saint Yi Htet
Master in Public Administration (NUS), Advance Certificate in Training and Assessment (Singapore)
Founder of Semma Vedas Imstitute & Planning & Development Head, Panna Institute
Saint Yi Htet, founder of Semma Vedas Institute, holds Advance Certificate in Training and Assessment by Singapore Workforce Development Agency and had earned double Master’s in Public Administration ... More
Faculties : Daw Saint Yi Htet|;|16
အသေးစားနဲ့ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုဟာ မိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ တစ်လွှားမှာလည်း မိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ရှိပြီး စီးပွားရေးရလာဒ်တွေကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ Corporate တွေထက် ပိုသာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာတွေရှိသလို ထူးခြားထင်ရှားပြီး ထိရှလွယ်တဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ မိသားစုပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ။ မှားယွင်းစွာလက်ခံထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ အမှန်ဖြစ်ရပ်တွေကို တင်ပြထားပါတယ်။ မိသားစုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ အားသာချက်တွေပိုထင်ရှားပြီး အားနည်းချက်တွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဆိုတာတွေအပြင် နမူနာလေ့လာစရာ Case Study တွေကိုပါ ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
8 Video(s), 1 Reading(s)
01. What is Family Business
02. Family Business Education
03. Dimensions For Family Business
04. Vision For A Family Business
05. Balancing Between Family and Business
06.HRM Practices For Effective Family Business
07. Good Parctices And Family Business Part - 1
08. Good Practices And Family Business Part - 2
Commitment : 90 Mins
မိသားစုလုပ်ငန်းများကို သမရိုးကျအစဉ်အလာအတိုင်း လုပ်ဆောင်နေသူများအတွက် ခေတ်နှင့်လျော်ညီပြီး ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များ၊ မိသားစုလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်သည့်အခါ အောင်မြင်ယုံသာမက အစဉ်အဆက် အဓွန့်ရှည်စွာ ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် အချက်များ၊ မိသားစုလုပ်ငန်းများ အနေနှင့် ယနေ့ခေတ်တွင် ကြုံတွေ့နေရသော ခြိမ်းချောက်မှုများနှင့် မည်ကဲ့ သို့ကျော်လွှားရမည့် နစ်စနစ်များကို ဝေမျှပေးထားသည်။
01. မိသားစုစီးပွားရေး အဓွန့်ရှည်ဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးများ မှတ်ကြစို့
02. More Development Family Business
03.Samples Of World Family Business
04.To Solve Family Business Problem (Part - 01)
05. To Solve Family Business Problem (Part -02)
06. မိသားစုစီးပွားရေး အောင်မြင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့ရန်